January 9, 2019 - PuraKhabar
चलचित्र ‘सिम्बा’ले बक्स अफिसमा २ सय करोडको कमाई गरिसकेको छ । योसँगै बलिउडमा नायक रणवीर सिंहको राज चल्न थालेको देखिन्छ । रणवीरको यो चलचित्र रिलिज भएको साढे २ महिनापछि अर्को नयाँ चलचित्र रिलिज हुँदैछ । उनी अभिनित चलचित्र ‘गली ब्वाइ’ फ्रेवुअरी १४ बाट रिलिज हुँदैछ । यो चलचित्रको आज ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ट्रेलरमा एउटा गल्लीमा भौतारिने यूवाको कथालाई प्रस्तुत गरिएको छ । चलचित्रमा रणवीर सिंह र नायिका आलिया भट्टको मुख्य भूमिका छ । जोया अख्तरले निर्देशन गरेको यो चलचित्रलाई एक्सल इन्टरटेन्मेन्ट र टाइगर बेबीको ब्यानरमा निर्माण गरिएको हो…
जयगोविन्द साह नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अग्रज नेताको नाम हो । वि.सं. १९७६ सालमा सिरहा जेलमा जन्मिएका साहको बाल्यकाल अत्यन्त कठिनाइपूर्वक बित्यो । पिता मिश्री साह र माता जगतकुमारी प्रेमका कारण जेल परेका थिए । जेल पर्दा गर्भवती रहेकी उनकी माताले उनलाई त्यही जन्म दिएकी हुन् । जयगोविन्द चार वर्षको उमेर भएपछि उनकी माता जेल सजाय भुक्तान गरी रिहा हुँदा साह पनि खुल्ला आकाशमा आइपुगे । जेलको बन्द कोठरीबाट खुला आकाशमा आएको एउटा बालकमाथि एकाएक अनेक समस्या आए । बाल्यकालमा अर्काका भैंसी चराउने काम गर्दागर्दै पढ्न सिके, सङ्गीत सिके, रामलीला समूहमा…
काठमाडौँ : ईश्वर पोखरेल (अविरल) काे ‘कति राम्री’ गीती एल्बम सार्वजनिक भएकाे छ। उनले अस्ट्रेलियामा नै करिब दुई दर्जनभन्दा बढी गीत रेकर्ड गराईकसकेका छन्। दुईवटा सोलो एल्बम ‘शीतल’ र ‘अराइज’ पनि अस्ट्रेलियामा नै सार्वजनिक गरेका थिए। अस्ट्रेलियाबाट सामुहिक गीती एल्बम ‘उडान’ २ वर्षअघि रिजिल गरेका थिए। उनी विदेशमा रहेर पनि नेपाली गीत संगीतमा निरन्तर सक्रिय हुँदै आएका छन्। ‘केही गीतहरु (रातो रिबन, काली मोरी, तिमी छैनौ त छैन शीतल, मैले झै मर्ने बारे सोच्छाै होला, कति बज्यो भनेर सोधम कि?) आदि दर्शक स्रोताले मनपराएका हुनाले उनलाई नयाँ एल्बम निकाल्ने रहर जागेको उनी…
काठमाडौं– नेपाली काँग्रेसले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको राजीनामा माग गरेको छ । राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले वाईडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको र्आिर्थक अनियमितताको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै विभागीय मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य रमेशजंग रायमाझीले विभागीय मन्त्रीले राजीनामा गरेर भ्रष्टाचार छानविनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सघाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले २ सय ४२ मेट्रिकटन तौलको विमान ल्याउनुपर्नेमा २ सय ३० मेट्रिक टन तौलको मात्रै विमान खरिद गरेर सिधा–सिधा भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै वाईडबडी विमान खरिद प्रकरणमा…
नेपाल को ‘क’ बर्गका बैंकलाई लक्षित गर्दै साइबर हमला जारी, ह्यकर्हरुले पठाय एस्तो इ-मेल
नेपाल को क बर्ग का बैंकलाई लक्षित गर्दै साइबर हमला भएको छ l बिगत केहि दिन देखी नेपाल राष्ट्र बैन्क को सिस्टम ह्यक गरी ह्यकर ले बिभिन्न बैन्क तथा बित्तिय सस्था संग सम्बन्धित ब्यक्तीहरु लाई भाइरस (माल्वेर) सहित को इ-मेल पठाइ रहेका छन् l तपाईंले वा तपाईंको सस्था ले कुनै एस्तो इ-मेल प्राप्त गर्नु भएको छ भने होसियार हुनुहोला, यो सँग आएका कुनै पनि लिन्क व फाइल लाई नखोल्नु होला यदी खोल्नु भएमा तपाईंको पूर्ण जान्कारी र नियन्त्रन उनिहरुको हात मा सजिलै जने छ जस्को कारणले तपाईंको खातामा भएको रकम…
आफूसँग भएको सहमति सरकारले तोडेको डा. केसीको आरोप, बस्लान त १५ औं अनसन !
काठमाडौं । प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले आफूसँग भएको सहमति तोडेर सरकारले धोका दिएको आरोप लगाएतका छन् । नेकपाको बहुमतका आधारमा संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन पारित गर्नुलाई केसीले धोका भनेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कारण आफ्नो १५ औं अनसनका क्रममा भएका सहमति विपरीत सरकारले ऐन बनाउन लागेको केसीको आरोप छ । प्रधानमन्त्रीले इमान्दारिता नदेखाएको र दुई तिहाइको दुरुपयोग गरेको भन्दै केसीले माफिया र दलाल पोस्ने कानूनविरुद्ध थप संघर्ष गर्ने आजै चार बजेबाट अनसन बस्न लागेको जानकारी पनि दिए । केसीले इलाममा अनसन बस्ने तयारी…
वासिङ्टन / अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र मेक्सिकोको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा र मानवीय सङ्कट बढेको बताउनुभएको छ । बढ्दो मानवीय तथा आप्रवासी सङ्कट समाधान गर्न मेक्सिकोसँगको सिमानामा पर्खाल निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको हो । अमेरिकी संसदले पर्खाल निर्माण कार्य “अनावश्यक र बढी खर्चिलो” भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले माग गर्नुभएको करिब ६ अर्ब अमेरिकी डलर पारित नगरेपछि बजेटमाथिको विवाद कायमै छ । राष्ट्रपतिले बजेट पारित नभए बजेट नै स्वीकृत नगर्ने अडान राख्नुभएको छ । संसद र राष्ट्रपतिका अडानका कारण विगत…
नायक ऋतिक रोशनका पिता निर्देशक राकेश रोशनलाई क्यान्सर भएको छ । उनलाई क्यान्सर भएको र सर्जरी समेत गरिएको जानकारी ऋतिकले ट्विटरको माध्यमबाट दिएका छन् । ऋतिकले ट्विट गरेसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत ट्विट गरेर राकेशको शिर्घ स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका थिए । ऋतिकले मोदीको ट्विटमा जवाफ दिदै पिताको सर्जरी राम्रो भएको उल्लेख गरेका छन् । राकेशको घाटीमा क्यान्सर भएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । राकेशका भाई राजेश रोशनले पनि अहिले स्वास्थ्य स्थिती राम्रो रहेको बताएका छन् । उनले केही दिनमा नै राकेशलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज मिल्ने उल्लेख गरेका छन्…
काठमाडौँ– काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम वृद्धि भएको छ । आज काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम ४ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ । मङ्गलबार काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम १ दशमलव ८ डिग्री सेल्सियस थियो । न्यूनतम तापक्रम नघटेको भए पनि दिउँसो तापक्रम नबढ्दा बढी चिसो महसुस भएको मौसमविद् सुजन सुवेदीले जानकारी दिए । ‘माघ महिना आउन बाँकी नै रहेकाले उपत्यकाको मौसममा अझै केही दिन उतारचढाव आउने छ’ उनले भने । उच्च हिमाली भेगका कही स्थानमा हल्का हिमपात र पहाडी भेगका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षासमेत हुने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ…
अष्ट्रेलिया र क्यानडा पठाइदिन्छु भनी डेढ करोड ठगी गर्ने युवक पक्राउ
२५ पुस, काठमाडौं । अष्ट्रेलिया र क्यानडा पठाइदिन्छु भनी १ करोड ५० लाख भन्दा बढी ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेकोछ । मंगलबार पक्राउ परेका पाल्पा रिब्दीकोट गाउँपालिका ३ का निश्चल भन्ने गणेश ढकालले २५/३० जना मानिसलाई अष्ट्रेलिया र क्यानडा पठाइदिन्छु भनी १ करोड ५० लाख ठगी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।